KATHMANDUTemperature 10°CAir Quality72
अभिनयको गहिराइ बुझेकाले हुनुपर्छ, उनलाई ग्ल्यामर देखिने एकोहोरो लोभ हुँदैन, प्रभावकारी भूमिकालाई जीवन्त बनाउन पाए पुग्यो ।
डेब्यु फिल्ममा शरीरको वजन घटाएर चिरिच्याट्ट देखिन मरिहत्ते गर्छन्, हिरोइनहरू । ‘राम्री’ नदेखिए किनारा लाग्ने भय हुन्छ । ग्ल्यामर क्षेत्र हुनुको नाताले हिरोइनलाई ‘स्लिम’ हुनैपर्ने दबाब हुन्छ तर भूमी पेड्नेकरले यी सब मान्यतालाई चुनौती दिइन् । पहिलो फिल्म दम लगाके हैसाका लागि झन्डै ३० केजी वजन बढाइन् । फिल्ममा मोटी दुलहीको भूमिकामा थिइन् । फिल्म ‘स्लिपर हिट’ को सूचीमा दरियो । समीक्षकले खुलेर प्रशंसा गरे, ‘भूमीको चरित्र साहसिक र अभिनय जीवन्त छ ।’
भूमी अभिनीत पछिल्लो फिल्म हो, बाला । फिल्मको केन्द्रमा छन्, कपाल खुइलिएर तनावमा फसेका पीडित पात्र बालमुकुन्द (आयुष्मान खुराना) । उनकी बालसखा हुन्छिन्, लतिका अर्थात् भूमी । काली भएकै कारण उनले अपमान सहनुपर्छ, आमालाई छोरीको बिहे नहोला भन्ने चिन्ता छ ।
त्यसैले फोटो सम्पादन गरेर गोरी बनाउँछिन् र आफैँले चलाउने छोरीको इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्छिन् तर लतिका स्वयंलाई चाहिँ आफ्नो वर्णप्रति हिनताबोध छैन, बडो आत्मविश्वासी छन् । जसरी पहिलो फिल्ममा आफ्नो प्राकृतिक वजन वृद्धि गरेकी थिइन्, उसैगरी यसमा भूमिकालाई प्राकृतिक बनाउन शरीर कालो बनाएकी छन् । बालाले बक्स अफिसमा कमाल गर्‍यो । सँगै भूमीको चरित्र र अभिनय पनि रुचाइयो ।
यी दुई फिल्मबाट प्रस्ट हुन्छ, हिरोइनको परम्परागत मानक भत्काउन भूमी कति जोडतोडका साथ लागेकी छन् । यही कारण हुनुपर्छ, बलिउडमा उनको रूप हैन, चरित्रप्रति प्रतिबद्ध अभिनेत्रीको पहिचान बनेको छ । तर यसरी फरक र आम हिरोइनले आत्मसात् नगर्ने चरित्रमा काम गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन्छिन्, कलाकारले जे गर्नुपर्ने, त्यही गरिरहेको ठान्छिन् ।
भारतीय मिडियासँग भनेकी छन्, ‘म एकदमै लोभी कलाकार हुँ । मलाई अभिनय मन पर्छ र हरेक खालका भूमिकामा देखिन चाहन्छु ।’ दर्शकको सिनेमा साक्षरता बढेको छ, मौलिक चरित्र रुचाउन थालेका छन्, त्यसैले समाजसँग नजिक कथा र चरित्रमा देखिन भूमी सधैँ उत्साही हुन्छिन्, चाहे त्यो देख्दा ‘चिटिक्क’ नपरेको किन नहोस् † उनी अगाडि थप्छिन्, ‘मेरा हरेक चरित्रले महिलालाई सशक्त र स्वाभिमान बनाउन भूमिका खेलोस् भन्ने चाह हुन्छ ।’
बलिउडमा भूमीको कोही ‘गडफादर’ छैनन् । कतिपय कलाकार डेब्यु हुनुपहिले सहायक निर्देशकको काम गर्छन्, उनलाई चाहिँ यशराज फिल्म्समा सहायक कास्टिङ निर्देशकका रूपमा ६ वर्ष बिताएपछि फिल्म खेल्ने मौका जुरेको थियो । अभिनयप्रतिको लगाव कति घनीभूत भने मोटी चरित्रमा देखिन कुनै संकोच नै लागेन । जबकि उनलाई परिवार र साथीभाइले मोटी बन्दा ‘इमेज’ बिग्रने भय देखाएका थिए ।
तर कहाँ त्यस्तो हुनु ! बरु उत्कृष्ट नवअभिनेत्रीको फिल्मफेयर अवार्ड चुमिन् । लगत्तै म्यान्स वल्र्ड नामक वेव सिरिजमा काम गरिन् । लैंगिक समानतामाथि बनाइएको यस सिरिजमा कल्की कोचलिन, परिनिती चोपरा र रिचा चड्डाको पनि अभिनय थियो, युट्युबमा रिलिज गरियो तर खासै चर्चा पाएन । त्यसपछि झन्डै दुई वर्ष उनलाई पर्दामा देखिएन । त्यतिबेला गाइगुइँ चल्न थाल्यो, कतै मोटीको छवि बनेकैले त भूमीलाई अरु फिल्ममा नलिइएको हैन ?
तर यो शंका चिरिदियो, ट्वाइलेट : एक प्रेमकथाले । यसमा अक्षयकुमारको अपोजिटमा थिइन्, ज्यान घटेको थियो । जब यो फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भयो, फिल्मभन्दा तौल कसरी घट्यो भनेर सोध्ने धेरै भए । उनी हाँस्दै भन्छिन्, ‘दोस्रो फिल्ममा शरीरको बदलावप्रति धेरैको चासो थियो ।’
घरमा शौचालय नभएकै कारण पति छोडेर माइत जाने पत्नीको भूमिकामा देखिएकी थिइन् । यो फिल्म र उनको चरित्र पनि सफल भयो । आयुष्मान खुरानासँगै अभिनय गरेको शुभ मंगल सावधान र नेट्फिलेक्स सिरिज लस्ट स्टोरिज्ले उनलाई थप ख्याति दिलायो । त्यसपछि सोन्चिरिया र सान्डकी आँख रिलिज भए । सान्डकी आँखमा उनले उत्तर प्रदेशकी नामुद निसानबाज चन्द्रो टमोरको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । यस फिल्मका लागि बन्दुक चलाउने प्रशिक्षण लिएकी थिइन् ।
हरेक फिल्ममा आम हिरोइनभन्दा भिन्न चरित्रमा देखिँदै आएकी छन्, भूमी । तर चुनौतीपूर्ण चरित्रमा काम गर्ने हुटहुटी मत्थर भएको छैन । भन्छिन्, ‘साहसिक भूमिकाका लागि प्रस्ताव नआएकै कारण मेरा फिल्म कम हुन्छन् । आफैँलाई चुनौती दिने चरित्र यो भने त जसरी पनि त्यो फिल्म गरिहाल्छु ।’
अभिनयको गहिराइ बुझेकाले हुनुपर्छ, उनलाई ग्ल्यामर देखिने एकोहोरो लोभ हुँदैन, प्रभावकारी भूमिकालाई जीवन्त बनाउन पाए पुग्यो । अझ महिलाप्रधान चरित्रमा उनको विशेष रुचि हुन्छ । ‘दर्शकले हाम्रा फिल्मसँग अभिनयको अपेक्षा राखेका हुन्छन्, ग्ल्यामर मात्र होइन । अभिनय र ग्ल्यामर दुवै भयो भनेचाहिँ सुनमा सुगन्ध हुन्छ,’ हिन्दुस्तान टाइम्ससँग उनले भनेकी छन्, ‘हलिउडमा कलाकारहरू अनस्क्रिन चरित्रका लागि शरीर पूरै बदल्छन् तर यसको मतलब उनीहरू ग्ल्यामर हुँदैनन् भन्ने त होइन ।’
फिनिक्सले यस वर्षको प्रतिष्ठित अमेरिकी ओस्कार अवार्डको उत्कृष्‍ट अभिनेता अवार्डसमेत हात पा...
सधैँजसो आलोचना हुन्थ्यो- ओस्कार अमेरिकी र पश्चिमा फिल्मका लागि हो । तर यसपटक एसियाली फिल्म...
मथिंगल खल्बल्याउने 'प्यारासाइट' को ओस्कार यात्रा
विदेशमा लोकप्रिय बनेको स्ट्यान्ड–अप कमेडी नेपालमा बामे सर्दै...
व्यंग्यका नयाँ बादशाह
समसामयिकदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ठगी र मायाप्रेमका विषयमा हाँसो र व्यंग्य प्रस्तु...
दक्षिण भारतमा अर्जुन रेड्डीको नाममा बनेको फिल्म बलिउडमा कविर सिंहको नाममा रिमेक गरिएको थिय...
नेपालमा कविर सिंह
रानी तेजकुमारीको मायामा भावविह्वल भएर राजा खड्गशमशेरले यो दरबार निर्माण गरेका हुन् । त्यसै...